NVidia waxay ku biirtay aasaaska Linux | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Naqshad, GNU / Linux, Noticias
War aad u fiican oo aan ka akhriyey gacmaha Genbeta iyo in aan kuu soo wado marka xigta. Waa hagaag, sida cinwaanku leeyahay, NVidia ayaa ku soo biiray Mu'asasada Linux, noqoshada shirkaddii 3-aad ee soo saarta jumladaha garaafka ee sidaas lagu sameeyo.
AMD e Intel Waxay xubin ka ahaayeen muddo dheer, inkasta oo midowgan cusub uusan arki doonin isbeddel xag-jir ah oo ku yimaada siyaasadda hadda jirta NVidiaWaxaan rajeyneynaa in mustaqbalka taageerada ay soo hagaageyso darawaladana ay sifiican u shaqeyn doonaan. Sida sidoo kale lagu muujiyey Genbeta:
Chips-ka Tegra, NVIDIA waxay kudarsatay isbadal Linux kernel hoostiisa ruqsada GPLv2, si kastaba ha noqotee, wadayaasha garaafyada GPU ee ka tirsan Chips-ka Tegra ayaa wali leh lahaansho.
Runtii tani waa war aad u fiican. Sababahan awgood ayaan u idhi ma fahmin inta qof ee weli ku fikiraya inaan wali nahay 1% kii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » NVidia waxay ku biirtay Linux Foundation
o3o oooh, waxay u egtahay mid wanaagsan, gaar ahaan hada markaan si lama filaan ah u raray shaashadda laptop-ka>: U ayaa tuuray mana keeni karo nafteyda inaan u geeyo adeegga (mana haysto lacag aan ku dayactiro jahwareerkeyga, lol) . ilaa lacag bixinta billaha ah (ama wali waxaan u isticmaalaa sida kombuyuutar desktop ah oo ku xiran kormeeraha, lol)
Si deg deg ah u soo iibso maxaa yeelay haddii aysan ahayn Carcam-ka Sandy-ka ah inuu ku dhibayo mar walba, waxaad arki doontaa waxa iskutallaabta ah.
Waxa aniga igu dhibaya sawirradan ayaa ah rakibidda wadayaasha, oo aan ahayn sida Intel oo kale oo aan loo baahnayn.
Laakiin tani waxay umuuqataa mid wanaagsan, sidaa darteed suuqyada muuqaallada ayaa sii ballaaranaya
Waxaad rakibaysaa darawallada Intel, haddii kale sawiradu ma shaqeyn doonaan. Inay iyagu xor yihiin oo qaybintaadu ay u sameyso si iska caadi ah, waa hagaag, waa caadi, laakiin rakib iyaga, way rakibi.
Jid ahaan, maahan inaan rakibo darawalka lahaanshaha NVIDIA in muddo ah (taas oo aan u maleynayo inay tahay waxa aad ujeedo), maxaa yeelay Nouveau horeyba sifiican ayey u shaqeysaa
Waxa aan ula jeedo ayaa ah, tusaale ahaan Arch, haddii aanan rakibin Intel waxba ka dhici maayaan, taas oo ay tahay in la sameeyo Ati ama Nvidia, haddii nidaamku shaqeyn waayo.
Hagaag, hadaanan rakibi xf86-video-intel qalad baan ka qabaa ... si fiican, eber video, eber wax walba. Aniguna ma lihi Ati ama Nvidia, waa uun laptop oo 128MB oo fiidyow dul saaran ah.
Kumbuyuutarka jabsaday, uma baahnin inaan rakibo wax si wax walboo aniga ila shaqeynayaan, Intel sidoo kale
Sababtoo ah markaad rakibto xirmada Xorg, mid kamid ah waxyaabaha ay ku tiirsan tahay waa xf86-video-intel iyo kuwa lahaanshaha leh ee ka socda NVIDIA ama AMD, maya 🙂
Waa tan faahfaahinta, oo ah inaanan rakibo xirmada Xorg sidan oo kale ... Waxaan kaliya rakibaa kuwa kaliya ee aan u baahanahay, ma doonayo inay ku xirto xirmooyinka Ati, iwm.
Waa hagaag, aan aragno haddii ay sidaas ku sii wanaajinayaan, in kasta oo AMD ay sannado qaadanaysay oo sawiradeedu weli yihiin kuwa ugu xun ee la taageero ...
Waxaa laga yaabaa inay bilaabeen inay xiiseeyaan hadda in Wayland ay u muuqato inay diyaar u tahay inay soo bandhigto nooca 1.0 iyo in Intel ay ka faa'iideysaneyso goobtaas. Hadday wax jiraan, waxaan u maleynayaa inay tani tahay war aad u fiican.
War aad u wanaagsan: D.
Hagaag, waxay durbaba qaadanayaan waqti ay ku keenaan Optimus ilaa Linux.
Anigu garan maayo waxa ka wanaagsanaan doona arrintan, waxay sii wadi doonaan inay ka dhigaan darawaladooda "lahaansho"
waxba isma beddelo
Waxaan sii wadi doonaa inaan dareemo xornimo leh nouveau
Sidoo kale aniga ilama aha inay wax isbeddelaan, maxaa yeelay waa ku filan tahay inaan arko taageerada xun ee ATI ee Linux, waxayna ka mid ahayd isla mashruuc muddo dheer ka hor midowgii Nvidia. Waxaan rajeynayaa inaan qaldanahay, oo faa iidooyinka ku soo kordha dadka isticmaala si xoog badan.
PS: Sidee quruxsantahay astaanta Chakra ... xD
Waad ku mahadsantahay ka sooqeyb galka baryada… 🙂
sikastaba kama arko tayda debian, waxbaa halkan ka qaldan xD
Xaqiiqdii, qoraaga plugin wuxuu si rasmi ah ugu daray taageerada, maadaama aan codsigeyga ku sameeyay degelkiisa oo aan faallo ka bixinayo ... O_O ... waxay ku dareen naaneysteyda isbeddelka. Hadda waxaan u qorayaa isaga oo sharraxaya horumarka [b] Isar [/ b] ku sameeyay biraawsarka birta, waxaanan u sheegayaa haddii ay tahay inay qof ku daraan
Ayyyyy the egoo !! Wax kale iguma dhacaan aniga hahahaha
Taasi waa sax, waxa ugu horreeya ee dadku u maleynayaan ayaa ah inay taabayaan dhamaadka balaaran ee madduucda waxa ugu xunna waa inta aan ogahay inay tahay wax iska soo horjeeda.
Ugu horreyntii, inaad "ka mid noqotid aasaaska Linux", ahaanshaha platina, dahab, xubin lacag ah, iwm, waa arrin tikidhada uun ah. Si kale haddii loo dhigo, haddii adiga Mr. X aad sameyso deeqda u dhiganta ee tigidhada, waxaadba tahay "xubin", wax shaqo ah kuma laha koodh, ballanqaadyo, ama inaad wax horumariso.
Hadda, muxuu taas ka faa'iidi doonaa? Marka laga tago filimada ay koox farabadan oo raxan raxan raaci doonta oo ka dhigi doonta inay saqafka dhaafaan, waxay xaq u lahaan doonaan inay suuq geyn la sameeyaan Linux iyo noocyadeeda, qiimo dhimis lagu sameeyo tababarka Linux (qof kasta oo isticmaal nidaamyada Linux-ka ayaa ku fiican tan), cod iyo codna ka bixiya "shirarka Linux Foundation."
Waxaa laga yaabaa in indhahaygu xun yihiin, laakiin waxaan arkaa in ballaca musqusha ay tahay kuwa kale. Tani macnaheedu maahan wax damaanad ah in ay jiri doonaan ballanqaad dheeri ah GNU / Linux.
Fudud qof walba wuxuu diirada saaraa Android qof walbana wuxuu rabaa jeexankiisa, taasi waxay kubiirtaa hadaanay iyagu marka hore haysan waxay noqon laheyd dan. Amd iyo Intel ayaa u sameeyay server-yada.
Ku jawaab rodolfo alejandro
Xaqiiqdii war wanaagsan
Ku jawaab Glacius
site xi xi tang dijo
Ku jawaab zi xiu tang site